Chii Anava (Oxandrolone)? Oxandrolone (53-39-4), inotengeswa pasi pemazita ezita rinonzi Oxandrin naAnavar, pakati pevamwe, inonzi anrogen uye anabolic steroid (AAS) mishonga inoshandiswa kubatsira kukurudzira kuwanda muzviitiko zvakasiyana, kubatsira kubvisa mapuroteni catabolism anokonzerwa ne kwenguva refu corticosteroid therapy, kutsigira kupora kubva kunopisa zvakanyanya, kurapa marwadzo emapfupa anokonzerwa ne osteoporosis, kubatsira mukukudziridza ...
Chii chinonzi Trenbolone enanthate? Uye iyo inoshanda sei? Trenbolone enanthate (10161-35-8) uye Trenbolone acetate (10161-34-9) ndiyo mbiri yeanowanzoshandiswa anabolic androgenic steroids. ITrenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate migumisiro inenge yakafanana. Kusiyana kunouya nenguva iyo imwe neimwe inotora kuti isunungure tsvina yeTrenbolone. Kunyange zvazvo inonzwika nenzira imwechete yakafanana, Trenbolone Enanthate uye ...
Chii chinonzi Masteron Propionate (Drostanolone Propionate)? Masteron Propionate (521-12-0) uye Masteron Enanthate (472-61-1) ndiwo akasiyana-siyana a Masteron ane musiyano muduku. Izvo zvose zvinokonzerwa uye zvinowanzove pakati pevarimi vemiti. Mhedzisiro huru pakati pemaviri ndiyo nhamba yehutungamiri uye hafu yehupenyu hwavo. Masteron Propionate dhijitini iduku asi inopiwa zuva rimwe nerimwe sezvo chirwere chinoshanda nekukurumidza uye chinogadzirisa ...